Dadka Ingiriiska kasoo gala oo Karantiil hotell lagu soo rogay-Mar kale - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Dadka Ingiriiska kasoo gala oo Karantiil hotell lagu soo rogay-Mar kale
Dadka Ingiriiska kasoo gala oo Karantiil hotell lagu soo rogay-Mar kale
Hey´adda caafimaadka dadweynaha ee FHI ayaa wax ka badal ku sameysay xeerarka qabanayo dadka kasoo galo dalalka Yurub qaarkood.
Xeerka cusub ayaa sheegaya in qofkii kasoo galo dalka Ingiriiska oo kale, uu ku qasbanaan doono inuu galo hotell karantiil, Laga bilaabo 19-ka bishan Luulyo(7).
Sidoo kale dadka ka imaada Belgimka, Faransiiska, Giriiga iyo malta ayaa iyagana gali doono karantiil guriga ah marka ay Norway soo galaan.
Hey´adda ayaa sheegtay in isbadalkan cusub uu imaaday, kadib markii qiimeyn lagu sameeyay xaaladihii ugu danbeeyay ee faafitaanka feyruska covid-19 ee dalalka Yurub.
Hoos ka fiiri qiimeynta dalalka ee cusub: Micnaha midabka:
Cagaar: Qofka loogama baahno karantiil iyo inuu isku baaro xuduudka, laakiin waa inuu iska diiwaangaliyaa liiska soo galitaanka.
Dhamaan midabada kale waxaa ugu yaraan qofka laga rabaa inuu iska baaro corona, uuna galo karantiil. Halka guduudka aadka ah looga baahanyahay inuu qofku karantiilka ku qaato hotell.
Xigasho/kilde: Nye reiseregler: Kypros og Storbritannia får krav om karantenehotell.
Previous articleSkien: Soomaali argagaxisnimo ku eedeysnaa oo 12 sano lagu xukumay
Next articleSweden iyo Finland oo joojiyay qoxootigii ay ku celin jireen dalkan
Waxa sual kaqaba sharciga sobaxay 16 kii 19 kana hirgelaya ee kusabsan STORBRITANNIA siden ugasogarna inaan solabano inagoon hotel karatil gelin??